Mianara bebe kokoa momba ny Fred Astaire Dance Studios
Inona no mampiavaka an'i Fred Astaire Dance Studios?
Avy amin'ny torolàlana momba ny dihy fampakaram-bady, fialam-boly vaovao na fomba hifandraisana amin'ny vadinao, fanatsarana ny fiainam-piaraha-monina, fahasalamana ara-batana sy ara-pihetseham-po, na ny fahazoana ny fahaizanao mandihy amin'ny ambaratonga manaraka, ny dihy miaraka amin'i Fred Astaire Dance Studios dia hiteraka fianarana haingana, ambaratonga avo kokoa ny zava-bita - ary tsiky maro. Noho izany, nahoana ianao no tokony hisafidy ny Fred Astaire Dance Studios?
Satria ny tontolon'ny hatsaram-panahy, hafanana ary aingam-panahy miandry anao isaky ny Fred Astaire Dance Studio!
Io no lazain'ny mpanjifanay amintsika fa tsikaritr'izy ireo hatramin'ny voalohany nidirany tao anatiny - angovo mahafinaritra, ary ny fahatsapana ny "fiarahamonina FADS" izay mandray, 100% tsy mitsaratsara ary tena mahafaly! Ny fitiavantsika dia manampy amin'ny fampiroboroboana ny fiainana - ara-batana, ara-tsaina, ara-pientanam-po ary ara-tsosialy - amin'ny alàlan'ny herin'ny dihy tsara sy manova.
Satria ny lesona fandihizana amin'ny fandihizana dia tokony ho FALY foana!
Ny filozofia fampianarana isaky ny studio Fred Astaire Dance dia tsotra sy mahitsy: mahafinaritra ny mianatra dihy amin'ny fandihizana! Miara-miasa amin'ireo mpianatra amin'ny sokajin-taona rehetra sy ny fahaiza-manaony izahay, ary ny atmosfera sariaka sy manentana antsika dia hanampy amin'ny fanaovana ny diany fandihizana misy anao. Misy antony an'arivony maro mahatonga ny olona hanomboka lesona dihy - ary raha vao asehonay aminao ny fahafinaretana amin'ny fandihizana ao amin'ny efitrano fandefasana dihy, fantatray fa te hiverina foana ianao!
Satria misy tombony be dia be ny dihin'ny ballroom!
Ny dihy Ballroom dia fitambarana tonga lafatra amin'ny fampihetseham-batana, ny fifandraisana ara-tsosialy ary ny fanentanana ara-tsaina - ary mety hitondra zavatra betsaka amin'ny fiainanao izany. Fanatanjahan-tena tsara izany; dia nanoratra momba ny tombontsoa ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana; afaka manatsara ny fiainanao ara-tsosialy sy ny fahatokisanao tena; mampihena ny adin-tsaina sy ny hakiviana; mampiroborobo ny fialan-tsasatra; dia outlet mahafinaritra ho an'ny fanehoan-tena sy famoronana; ary FALY !! Miaraka amin'ireo antony rehetra ireo hanombohana mandihy - manohitra anao izahay mba hahita antony marimarina fa TSY.
Satria ny fandaharam-pampianarantsika dihy amin'ny efitrano fandihizana dia manampy anao hianatra haingana kokoa ary hahatratra bebe kokoa!
Ny fandaharan-draharahan'ny Fred Astaire Dance Studios momba ny lesona tsy miankina, ny lesona sy ny antoko fanazaran-tena dia manome antoka fa mianatra araka izay azo atao ianao, amin'ny fotoana fohy indrindra, amin'ny fitanana betsaka indrindra ary amin'ny FUN. Raha ny marina, handeha ho any amin'ny dihy matoky ianao amin'ny faran'ny lesona voalohany indrindra ataonao! Ny repertoire anay dia mandrakotra ny dihin'ny efitrano fandihizana - American, Latin, Style International, Ballroom Style, na dihy Exhibition sy Theatre Arts aza, ho an'ireo mpandihy ara-tsosialy sy mpifaninana.
Noho ireo mpampianatra dihy matihanina manan-talenta!
Fred Astaire Dance Studio Instructors dia mpanabe dihy manan-talenta izay avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, ary tena tia ny zavatra ataony. Betsaka no manana mari-pahaizana Fine Arts ary mpandihy matihanina mpifaninana am-pahavitrihana. Ireo mpampianatray amin'ny dihy dia samy mamita ny asa hentitra rehetra takiana mba hahazoana mari-pahaizana ao amin'ny Curriculum Fred Astaire - izay manolotra ireo vato manorina dihy ho an'ny mpiara-mianatra amin'ny fomba ianaran'ny olona voajanahary. Ny fandaharam-pampianarantsika amin'ny dihy, ampiarahina amin'ny fangorahan'ny Mpampianatra antsika, ny heriny ary ny hatsaram-panahiny dia hanampy anao hahazo tombony betsaka amin'ny lesona fandihanao.
Noho ireo hetsika sy fifaninanana dihy fandihizana ataontsika!
Fred Astaire Dance Studios dia manolotra hetsika isan-karazany mahafinaritra eto an-toerana mba hahafinaritra sy mahafa-po ny fiainanao dihy. Ny fety vahiny, fampirantiana, jiro fitsangatsanganana, hetsika fanentanana eny amin'ny fiarahamonina, fivorian'ny Coaching manokana ary ny Fivoahan'ny Vondron'olona ivelan'ny tranonkala dia mandrisika ny fifaneraserana ara-tsosialy ary manampy anao hampihatra izay ianaranao. Ary ny Fifaninanana dihy isam-paritra, nasionaly sy iraisam-pirenena ho an'ny Pro-Am ary ny dihy matihanina dia manome anao fotoana ahafahana manome aingam-panahy hifaninana, hivezivezy ary hanatsara ny fahaizanao mandihy amin'ny tontolo manohana sy mahaliana.
Noho ny fanolorana fanolorana vola ho anay!
Araraoty ny tolotra fampidiran-dresaka manokana natolotsika ho an'ny mpianatra vaovao fotsiny, ary raiso ny dingana voalohany hanatanterahana ny tanjon'ny dihy fandihizana. Alefaso fotsiny ny Form Form eto amin'ity tranonkala ity, ary hifandray amin'ny antsipiriany mahaliana momba ny safidin'ny programa anay izahay ary misy fihenam-bidy manokana ho an'ireo mpianatra vaovao (izany hoe azo antoka hahatonga anao handihy!). Mijanona ary zarao aminay ny tanjon'ny dihy, dia hanampy anao ho tonga any izahay!
Manantena ny hahita anao eo amin'ny sehatry ny dihy tsy ho ela izahay.
Hizaha ny Toerana rehetra
Atombohy ny fandihizana anio!
Mijanona mavitrika ao an-trano!